Badhaasni Sabboonummaa Alaabaa biyyaan kabajamuu dha!
Date: February 22, 2012Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 22 Guraandhala 2012) Qabsoon bilisummaa Oromoo adeemsa darbe keessatti maal fa’aa galmeessee darbe? Galmeen Seenaa QBO har’as akkuma kaleessaatti kanneen qabsicha keessatti seenaa dhaabbataa bara baraan dhaloota boonsu dhiisanii darban galmeessuu isaa itti fufa.
Qabsoon keenya qabsoo Haqaa fi Mirgaa ti; qabsoon keenya qabsoo bilisummaa ti. Qabsoon keenya qabsoo nageenyaa ti; qabsoo finna sabaa fi biyyaa ti; qabsoo jireenyaa fi latiinsa egeree ti; qabsoo alaabaa keenya iddoo kufee kaasuun tarree biyyoota addunyaatti dabalamuu ti. Qabsoo Bilisummaa Oromoo, qabsoo biyyaa fi saba galmee seenaa keessaa haqame deebisanii galmee seenaa addunyaa keessatti gadi-dhaabuu ti!! Kanaaf, lubbuu gootota hedduu itti shidna; lafee jaallan qaqqaalii itti caccabsna; dhiiga sabboontota hedduu itti dhangalaasna. Kun immoo haga galii isaa gahutti, kan itti fufuu dha. Dhaadannoon keenyas, “Qabsaa’aan ni kufa; qabsoon itti fufa!” kan jedhameefis kanuma.
Akkuma seenaa qabsoo irraa hubatamutti, kanneen qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bu’aa bahii fi hadhaa qabsoo mara danda’anii seenaa sabaa fi biyya boonsu galmeessanii darban, galmee seenaa keessatti kabajaan galmeeffaman; galmee seenaa keessattis kabajaa fi ulfina olaanaan jiraatan! Hunda caalaa immoo, kanneen bara jireenya isaanii kabajaa fi mul’ina alaabaa saba isaaniif wareega baasan, faandhahii dhaloota egeree ta’uun galmee seenaa keessa yaadataman!! Badhaasni Sabboontota akkanaaf kennamus, waan isaan ittiin biyya isaanii boonsan saniin isaanis boonsuu dha. Egaa, Badhaasni Sabboonummaa, badhaasa waan biyyi ofii ittiin boonsanii fi kabachiisaniin kabajamuu dha; akkuma bara jireenya isaanii alaabaa biyyaan kabajamanitti, gaafa awwaala isaanis alaabaa biyyaan dabaalamanii gaggeeffamuu dha. Badhaasni Sabboontoummaas kanuma!!Isaan akkasii gaafa boqotanis, ALAABAA kabajaa dhiigaa fi lafee jaallan qaqqaalliin bakka kufee kaafamee jiraachisameen dabaalamanii gaggeeffamu!!
Previous Previous post: Jechoota Moggayyaa Afaan Oromoo
Next Next post: Tomorrow Can be Different